Tian’i Hong Kong Hampahafantarina Fotsiny Ve Izay Tena Soatoavina Lalaina Amin’ilay Valisoa Miteraka resabe? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2016 17:13 GMT
Niteraka resabe ilay fandaharana miavaka nifantenana ireo tanora folo miavaka any Hong Kong. Natao mba hamantarana izay tanora nandray anjara tamin'ny fiarahamonina ary mahavita manome modely amin'ny fahombiazany ilay fandaharana tohanan'ny “Jeune Chambre Internationale”. Na dia betsaka noho ny mahazatra aza ny fanendrena tamin'ity taona ity, olona dimy monja no nahazo loka – ny vitsy indrindra tao anatin'ny 15 taona. Ary iray amin'ireo mpandresy i Fonia Wong Leung-fong, 40 taona, miliardera..
Wong, mpitantana fampiasam-bola, nilaza nandritra ny lanonana fankasitrahana fa ny ho tonga mpanankarena no iray amin'ireo nofiny teo amin'ny fiainana. Nilaza tamin'ny vahoaka izy fa nividy ny tranony voalohany tami'ny 2004 teo amin'ny faha-27 taonany, ary nandoa ny trosany tao anatin'ny roa taona. Miliardera izy ankehitriny.
Fony mbola tany amin'ny anjerimanontolo, nilaza izy fa nahazo HK$30,000 isam-bolana tamin'ny alalan'ny “fivarotana mivantana amin'ny sehatra marolafy” (fomba fivarotra iray mampiady hevitra, izay ahazoan'ireo mpivarotra valisoa, tsy amin'ny varotra izay ataony ihany fa amin'ny varotra ataon'ny mpivarotra hafa izay karamain'izy ireo ihany koa), nireharehany fa tsy nandany na inona na inona tamin'ny fialamboly sy fialantsasatra izy tao anatin'ny folo taona afa-tsy fitsidihana tantara an-tsehatra vitsivitsy sy trano filanonana . Tamin'ny lahateniny, nandrisika ny tanora i Wong mba hanaraka ny ohatra nomeny ary hiasa “in'efatra avo heny mafimafy kokoa noho ny ankabeazan'ny olona.”
Navoakan‘ny gazety iray ao an-toerana taty aoriana fa nividy ny fananany voalohany i Wong tamin'ny taona 2003 nandritra ny firongatry ny valanaretina ny SARS tany Hong Kong, tamin'ny fotoana nampirodana ny toekarena tao an-toerana. Rehefa tapitra ny tahotra ny aretina, tafakatra nihoatra ny 350 isan-jato ny tena sandan'ny tranony, nahatonga azy ho mpanapitrisa
Nandritra sy taorian'ny firongatry ny valanaretina SARS, lasa namboly fankahalana goavana an'ireo mpanararotra ny vahoaka ao Hong Kong.
Mihoatra lavitra noho ny SARS, ny fotoana nampahomby an'i Wong teo amin'ny sehatry ny trano sy tany dia niteraka fankahalana noho ny antony hafa koa. Tao anatin'ny folo taona farany, ny tahan'ny vola miditra amin'ny mponina ao Hong Kong dia niakatra folo isan-jato, fa nitsambikina maherin'ny 300 isan-jato ny vidin-trano fonenana.
Ireo mpanao gazety sy ny mpampiasa ny haino aman-jery sosialy ihany koa dia liana tamin'ny fifandraisan'i Wong akaiky amin'i Antony Wu Ting-yuk, lehiben'ny mpitsara mpikambana ao amin'ilay fandaharanasa Tanora Folo Miavaka. Nilaza i Ting-yuk fa nambarany ny fifandraisan'izy ireo ary nihataka tsy nandray anjara tamin'ny dingan'ny fifidianana izy, fa tsy nihena ny ahiahin'ny vahoaka mikasika ny fidirany eo amin'ny loka tamin'ity taona ity.
Nandritra ny herinandro mahery; rakotry ny kiana momba ny lokan'i Wong sy ny lahatenim-pandreseny ny haino aman-jery sosialy . Tadiavo ao amin'ny Facebook ny anarany, fa izao hatrany no sasany amin'ireo fanehoankevitra henjana ho hitanao:
Mijery ny namana ho toy ny vato fandiavana, misy zavatra hafa ve amin'ity tany ity ka tsy ho faranany amin'ny resaka fahazoam-bola?
Betsaka ny resaka mirehareha momba ny fahombiazany eo amin'ny fitadiavam-bola, angamba izany rehetra izany momba ny fifandraisana. Tena miarahaba anao … WTF.
Misy mpanoratra sasany, na izany aza, milaza fa maneho izay tena famaliana soa ataon'ny fiarahamonina ny tantaran'i Wong. Robin Wilde, mpanoratra avy amin'ny haino aman-jerim-bahoaka PolymerHK, dia nanoratra sady naneso hoe:
Tena olo-mendrika manao ny marina ny mpitsara ny TOYP ary farany dia miresaka ny tena famaritana ny “miavaka” eo imason'ny vahoakan'i Hong Kong: “Raha manana fananana ianao, miavaka ianao izay. Raha tsy izany, tsy alehany ianao.” Ny fepetra rehetra hafa toy ny” fandraisana anjara amin'ny fiarahamonina, “na” ho modely ho an'ny fiarahamonina dia “lainga fotsiny ary tsy mendrika ho marihana.
Lam Long Yin, mpianatra iray mpikatroka mafàna fo, namerina mitovitovy amin'izany:
Ity Ramatoakely Wong ity dia marina kokoa fotsiny noho ny hafa. Miresaka tsy misy fepetra momba ny hany soatoavina ao Hong Kong izy: ny vola.
Nanazava toy izao Yin avy eo :
Anthony Wu no lehiben'ny mpitsara. Izy dia olona manan-danja ao aorian'i Henry Tang [alohan'ny fifidianana ny Lehibe Mpanatanteraka tamin'ny 2012], fa taorian'ny fifidianana, dia nasehony haingana ny tsy fivadihany [amin'ny tale jeneraly mpandresy CY Leung]. Mpitàna bokimbola izy fa naato mandritra ny roa taona ny fahazoandàlany noho ny fitondrantena ratsy, karazana lehilahy marani-tsaina mahazatra any Hong Kong.
Mpitsara Wong Ying Wai, avy amin'ny sehatry ny fandraharahana fanorenana ary Tale Jeneralin'ny Sands Shina amin'izao fotoana izao [mpandraharaha amin'ny Casino any Makaô] sy filohan'ny Biraon'ny Fiadidiana ny Fampandrosoana ny Zavakanto any Hong Kong (hahaha). Taona vitsy lasa izay, dia voakiana izy vokatry ny fampiasany ny volam-panjakana tamin'ny fanampiany ny zanany lahy Jonathan Wong “mpihira pop”. Anita Fung, fiilohan'ny fikambanan'ny Banky ao Hong Kong.
Mpitsara Wong Yuk-sana, talen'ny Hong Kong Open University. Fanta-bahoaka tamin'ny fanohanany amin-kafanam-po an'i CY Leung, mpikamban'ny Antoko Kaominista Shinoa (nolaviny izany) ary solontenan'ny Kongresy Nasionalim-bahoaka PRC any Hong Kong; Tim Lui, mpitàna bokimbola [Lui ihany koa no filohan'ny Komitin'ny Fanabeazana ary solontenan'ny Kongresy Nasionalim-bahoaka PRC ao Hong Kong]; Pang yiu ny Kai, filohan'ny Antenimiera jeneralin'ny varotra ao Hong Kong.
Azo raisina tanteraka araka izany ny naha-voafidy an'i Wong miaraka amin'izao endrika isehoan'ny mpitsara izao.
Tamin'ny taona lasa, ireo mpitsara amin'ilay fandaharanasa dia nifidy ny talen'ny teatra ao an-toerana Banky Yeung Ping Kei, izay efa nandray anjara mavitrika tamin'ireo hetsi-panoherana mpandàla ny demaokrasia tamin'ny 2014. Yeung aza dia nitsikera ny tale jeneraly amin'izao fotoana izao, CY Leung, tamin'ny kabariny nandritra ny fizarana loka.
Tamin'ity taona ity, nisoroka olo-malaza ara-politika mahabe resaka tahaka izany ny fikambanan'ny mpitsara. Ankoatra an'i Wong, nanolotra loka ho an'ny kandidà efatra miavaka tsy manana hevitra miavaka na fahaizana koa ny mpitsara, anisan'izany ny Edward Choi Man-lik, mpahay siasa miasa amin'ny laboratlara monina any Sierra Leone sy Angletera. Man-lik lohalaharana niasa teny an-kianja nandritra ny fiparitahan'ny valan'aretina Ebola tany Afrika Andrefana.